केपी ओली बारे मदन भण्डारीको खुलासाः विद्या भण्डारी खुसी हुँदा हाँस्छन्, ठर्राले विगार्यो मृगौला ! (भिडियो)::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
केपी ओली बारे मदन भण्डारीको खुलासाः विद्या भण्डारी खुसी हुँदा हाँस्छन्, ठर्राले विगार्यो मृगौला ! (भिडियो)
काठमाडौं– मदन भण्डारीका सह–यात्री राधाकृष्ण मैनालीले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्या भण्डारी खुसी हुँदा हाँस्ने गरेको बताएका छन् । हालै एक अन्तरवार्ताका क्रममा उनले भण्डारी खुसी हुँदा ओली हाँस्ने गरेका बताएका हुन् ।
‘थाहा छैन, उनलाई के मजा लागेको छ । तर, विद्या खुसी हुँदा उनी हाँस्छन् ।’ मैनालीले मदन भण्डारी हत्याको छानविनको प्रतिवेदन नै ओलीले नबुझाएको समेत बताएका छन् । ‘दासढुंगा छानविनमा एक सदस्यीय आयोग बनाइयो । त्यो आयोगमा रहँदा उनले दुईचार ठाँउ कुरा गर्दा के बुझे भने यो दास ढुंगामा विचित्रको खेल छ, बाहिरैबाट सञ्चालित छ, धेरै खोजिनीति गरो भने मलाई पनि त्याहिँ लान्छन् भनेपछि उनले प्रतिवेदन नै नदिएर । उनी उल्टै आतंकित बने,’ उनले भनेका छन् ।
ओलीले प्रचण्डलाई कार्यकारी दिएर भुल्याउन खोजेको तर, त्यसमा केही नभएको मैनालीको जिकिर छ । ‘प्रचण्डलाई कार्यकारी भनेका छन्, तर त्यसमा केही पनि छैन । प्रचण्डलाई के लागेको छ भने यो धेरै दिन टिक्दैन । त्यसैले रुघेर बसेका छन्,’ उनले भनेका छन् । रक्सी धेरै पिएका कारण ओलीको मृगौला फेल भएको उनको भनाइ छ । ‘पाटनको ठर्रा खाएर उनको मृगौला फेल भएको हो । गृहमन्त्री भएपछि रक्सी धेरै आउन थाल्यो, धेरै खान थालेपछि मृगौला ड्यामेज भएको हो,’ मैनालीले भनेका छन् ।
कम्युनिस्ट मेयर विद्यासुन्दरविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि आयो यस्तो आदेश